ကလေးက G6PD ရှိလို့ပါ …
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. G6PD ကလေးအတွက် ဘာတွေရှောင်ဖို့ လိုပါသလဲ။ A. G6PD က အရမ်းကြီး ကြောက်စရာမလိုပါဘူး။ အဓိကကတော့ တောင်ကြီးပဲ၊ ပဲကြီးတို့လို အစားအသောက်တွေနဲ့ပဲ မတည့်တာပါ။ ကျန်တဲ့ ကုလားပဲ၊...
ကလေးကို ဖြည့်စွက်စာ စကျွေးတော့မယ်ဆိုရင်
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကလေးကို လေးလမှာ ဖြည့်စွက်စာ စကျွေးသင့်ပါသလား။ ဖြည့်စွက်စာ စကျွေးမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုအချက်တွေကို ဆောင်သင့်၊ ရှောင်သင့်ပါသလဲရှင့်။ A. ကလေးတွေ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုမှန်စေဖို့ ဆောင်သင့်၊ ရှောင်သင့်တာတွေ ရှိပါတယ်။ ကလေး...
ပါမောက္ခဦးနေဝင်း (အရိုးခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. တစ်နှစ်အရွယ်ကလေးက သာမန်လူတွေလို ခြေဖဝါးမခွက်ဘဲ ပြားနေပါတယ်။ အဲဒီလို ခြေဖဝါးမခွက်တာက စိုးရိမ်ရပါသလား ဆရာ။ မနီ၊ သာကေတ။ A. သာမန်ခြေဖဝါးတွေက လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာ ခြေထောက်ကိုဖိလိုက်တဲ့အရှိန်နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းထားပေးနိုင်ဖို့အတွက် ခြေဖဝါးကအလယ်နေရာကချိုင့်ပြီး...
ကလေးလိုချင်ပါတယ် . . .
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ကျွန်မအသက် ၄၂ နှစ်ပါ။ ကလေးလိုချင်လို့ အကြံဉာဏ်လေးလိုချင်လို့ပါ။ နွယ်သာကီ နွယ်သာကီ(FB) A. အိမ်ထောင်ကျတာ ဘယ်နှနှစ်ရှိပြီလဲ၊ အခုမှ ကလေးစယူမှာလား၊ အရင်ကမွေးဖူးလား ဒါတွေကို သိဖို့လိုပါတယ်။ အသက်...
အိမ်မှာ သင့်ကလေးအတွက် စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စရာများ
ငွေကြယ်စင်ယံ ကလေးတွေရဲ့စိတ်က နုနယ်လှပါတယ်။ လူကြီးတွေက ကလေးအနေနဲ့ ဘာမှခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ထားတဲ့အရာတွေက တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကလေးအတွက် ကြီးစွာသော စိတ်ဖိစီးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ (၁) စီးပွားရေးအခြေအနေ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်တွေဟာ အိမ်တွင်းမှာမသာမယာဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်တာ၊ အလုပ်အကိုင်တွေအဆင်မပြေတာ၊...
မွေးပြီးပြီးချင်း အရေပြားထိတွေ့မှုကြောင့် မိခင်နှင့်ရင်သွေးချည်နှောင်မှု သံယောဇဉ်တိုးစေနိုင်
ကိုထက် မိခင်နဲ့ကလေး အရေပြားချင်းထိတွေ့မှုက နှစ်ဦးစလုံးကို စိတ်ပင်ပန်းမှုပြေပျောက်စေပြီး ချည်နှောင်မှု သံယောဇဉ်တိုးစေကာ မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးမှုကို ပိုမိုလွယ်ကူစေကြောင်း နယူးယော့ခ်လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။ ကလေးမွေးပြီးချိန်မှာ မိခင်နဲ့ရင်သွေး အရေပြားချင်းထိတွေ့မှုကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ကျခြင်း၊ ကြာရှည်အိပ်ရေးဝ၀ အိပ်စက်အနားယူနိုင်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်မြင့်တက်ခြင်း၊ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု ကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့ ငိုကြွေးနှုန်းနည်းပါးခြင်း စတဲ့ကောင်းကျိုးတွေ...